» मर्चरी नभएर भागरथीको शव अझै आइसमै, कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?
मर्चरी नभएर भागरथीको शव अझै आइसमै, कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?
२०७७ माघ ३०, शुक्रबार २१:५९
बैतडी । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीको सक्रियता र अनुसन्धान जारी छ । माघ २१ गते विद्यालय गएकोमा भागरथी साँझ घर नफर्केपछि खोजतलास गर्दा माघ २२ गते विभत्स अवस्थामा स्थानीय लवलेक जङ्गलमा फेला परेकी थिइन् ।
“शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दा, कलडिटेललगायतबाट घटनाको एकदमै नजिक पुगेका छौँ”, बैतडीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले भने, “विभिन्न कोणबाट गरेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट हामी थप नजिक पुगेका छौँ, छिट्टै दोषी सार्वजनिक हुन्छ ।”
घटनाको नौ दिन भएपनि भागरथीको दाहसंस्कार हुन सकेको छैन । शनिबार शव परीक्षण सम्पन्न गरिएको भए पनि आफन्तले अझै शव बुझ्न नमानेका हुन् । घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी हत्यारा पत्ता नलाग्दासम्म शव नबुझ्ने भागरथीका काका शिवराज भट्टले बताउनुभयो । अस्पतालमा शव सुरक्षित राख्ने‘मर्चरी’ नहुँदा समस्या भएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका डा. बसन्तराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । “मर्चरी नहुँदा हाल आइसमा राख्ने गरेका छौँ”, उनले भने, “मर्चरी मगाउने पहल गरेका छौँ तर प्रदेशमै मर्चरी छैन ।”